JINGHPAW KASA:ြိငိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေစဉ် ဂျာပူ၌ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ြိငိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေစဉ် ဂျာပူ၌ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
အောက်တိုဘာ (၃၁) ဗုဒ္ဓဟူး
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဗမာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ် ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်တပ် တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော်လမ်း ဂျာပူတွင် ဗမာစစ်သားများ၏ ထိုးစစ်ဆင်လာမှုကြောင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ၏ ခမရ (၃၂၁) တပ်ရင်များနှင့် အောက်တိုဘာ (၃၀) ရက်နေ့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရသည် ယခုကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေစဉ်တွင်ပြင် ရှေ့တန်းသို့ စစ်အင်းအားများ အလုံးအရင်း ပို့ဆောင်နေခြင်းသည် အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ကမ္ဘာကို လိမ်ရန်သက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်သူများမှ မှတ်ချက် ပေးလာကြပါသည်။ ဤစစ်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ (၅) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ် 30.10.2012 နေ့ည 16:00 နာရီနဲ့ 21 နာရီမှာလည်း နမ့်မှောမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လေ အဲဒီမှာ KIA မျိုးချစ် ရဲဘော် 60 လောက်ကျသွားတယ်ပြောတယ် အစိုးရဘက်ကတော့ မိုင်းမှန်တာ3ယောက်ထိတယ်တဲ့ သေတော့ မသေဘူး
ဗမာအစိုးရကိုတောင်းပန်ပါတယ် တိုက်ပွဲတွေဆက်မဖြစ်တော့ပါနဲ့ လို့ သင်တို့ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ တစ်ချက်ပစ်တိုင်း kia မျိုးချစ်ရဲဘော် တွေ အများကြီးသေတယ် တောထဲမှာခွေးတွေဝက် တွေလိုမသေစေချင်ဘူး ဒါကြောင့်တောင်းပန်ပါရစေ ငဲ့ညှာပေးကြပါ မြန်မာစစ်သည်တို့
Yea right .. Don't guess .. Just admit much more death in Burmese army than KIA..u guys don't even dare to announce it. Shame on u regime dog
ဗမာ တပ် တွေ တက် လာသမျှ သေ မှာ ဘဲ
၁ နှစ် ကျော် နေ့ တိုင်း တက် လာ တယ်
ဘယ် ရောက် သွား လဲ? ရှင်း ပါ တယ် သေ
ကုန် လို့ ပေါ့
ပာုတ်တယ်ဗိူိ့ ယောက်ဖရ KIA စစ်သားတွေ သေကုန်လို့ မပခ မှာ မုဆိုးမ တွေပိုနေ တယ်။ယောက်ကျား ပိသရင် ကြိုဆိုပါဧ။်တဲ့။
သေတာက KIA ပြန်မလာတာက ကျမ ယောက်ကျား